Iindaba -Zinzisa uhlengahlengiso olucekeceke kwaye uncede uYongjie aphucule imveliso yakhe ekrelekrele
Nzulu uhlengahlengiso olucekeceke kwaye uncede uYongjie ukuba anyuse imveliso yakhe ekrelekrele
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, u-Yongjie wabamba umhlangano ngeprojekthi yenguqu ecekeceke, kwaye usihlalo wenkampani u-Shen Jianguo ucinezele iqhosha lokuqalisa. “Phantsi kwempembelelo yobhubhane wangoku wasekhaya nowangaphandle, uqoqosho lwehlabathi lujamelene nemiceli mngeni. Kufuneka "sijonge ngaphakathi" kwaye sibe yiziqu zethu, kwaye siqhubeke ukuseka izibonelelo zokuphindaphinda, okukhawulezayo, okuhle kunye noqoqosho 'ezinokudala ixabiso elongezelelekileyo kubathengi. ” Umnumzana Shen ubonakalise ukuba kunentsingiselo ngakumbi ukuqala iprojekthi yotshintsho olucekeceke ngeli xesha.
Kwintlanganiso, uMnu.Shen wakhupha iileta ezigunyazisayo kwinkampani yabacebisi, kwaye wakhupha uxanduva kwiinkokeli zeqela leprojekthi ezi-3 ze-5S kunye neqela elithembekileyo lokuphucula iqela, iqela lokuphucula i-PMC, kunye neqela lokuphucula i-TPM. Bonke abathathi-nxaxheba bathathe izifungo kunye nolunye unxibelelwano. , Kwaye wakhupha isicwangciso somsebenzi.
Okokugqibela, uMnu.Shen ubeke phambili iimfuno ezintathu zabo bonke abasebenzi: Okokuqala, inqanaba eliphezulu lobumbano, xa iLean ingagqitywanga, kuphela xa isenziwa, kuphela kwendlela yokuba inkampani iphucule kwaye iphuhle; Okwesibini, thabatha isenzo ngokukhawuleza nangokungqongqo; Okwesithathu, sebenzisanani ukufezekisa iinjongo ezibekiweyo kwaye nikwazi ukugqitha kwiinjongo. Imeko yentlanganiso ibishushu, kwaye wonke umntu ebegcwele ukuzithemba kwiziphumo ezilindelekileyo.
Kwixa elizayo, u-Yong jie uya kugxininisa ekunikeleni ingqalelo kwizinto ezintsha zesayensi kunye netekhnoloji, esebenzisana neYunivesithi yase-Beijing yezeNzululwazi kunye neTekhnoloji, iYunivesithi ekuMbindi weSouth kunye nezinye iikholeji ezaziwayo zasekhaya, amaziko ophando, amaziko eshishini ePhondo kunye nophando lwamashishini ePhondo nophuhliso iziko. Siphanda kwaye siphuhlisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto zealuminium, ukuhlangabezana neemfuno zobugcisa ezivela kubathengi abahlukeneyo.
U-Yongjie uya kulandela umgaqo-nkqubo wezoshishino "aphathe ishishini lokuqala kwiklasi yehlabathi, enze iimveliso zelizwe jikelele", Gxininisa kwindlela yokuphucula umgangatho ophezulu, kwaye uzame konke okusemandleni ethu ukwenza iYong jie njengeshishini legolide kwicandelo lokulungisa ialuminium.